Eufy RoboVac G20 Hybrid nadiif ah oo hufan oo hufan [Dib u eegis] | Qalabka Wararka
Eufy Waxay sii wadaa inay sharad ku xidho, caqli iyo, ka sarreeya, guriga waxtar leh. Xaaladdan oo kale, waa inaan ka hadalnaa kuwa yaryar, robots wareegsan ee xiddigta ka ah fiidiyowyo badan oo TikTok ah, badanaa sababtoo ah nacaybka gaarka ah ee ay ula dhaqmaan xubnaha kale ee guriga, sida bisadaha.
Munaasabadan waxaan si qoto dheer u falanqeyneynaa Eufy RoboVac G20 Hybrid cusub, beddelka dhexe ee leh nuugid weyn iyo qaabeyn sahlan. Nagala hel ikhtiyaarkan ugu dambeeya ee buug-yaraha nadiifinta ee ku xiran ee Eufy na siiya iyo haddii ay runtii mudan tahay in xisaabta lagu daro kuwa kula tartamaya.
2 Qaabka walxaha iyo sifooyinka farsamada
3 Nadiifinta iyo hawlaha
Xaaladdan oo kale Eufy ma sharadin, ma aysan soo saarin wax cusub, kuma aysan dhicin ... Aan run sheegno, way adagtahay in la arko mashiinka nadiifiyaha ah ee robot-ka kaas oo soo jiidanaya dareenkaaga, asal ahaan dhammaantood waa isku mid waxaanan fahamsanahay inay taasi tahay. sababtoo ah xaqiiqda ah in naqshadiisu ay tahay mid shaqeyneysa oo beddeleysa hal millimitir oo keliya waxay keenaysaa dhibaatooyin ka badan xalalka. Taasi waa sababta Ma xisaabtamin doonno in qalabka nadiifiyaha ee robot-ka uu u eg yahay saddexda milyan ee kale ee suuqa yaalla waxaanan diirada saari doonaa qaabka qalabkiisa iyo tayada agabkiisa.
Ma ka heshay? Ku iibso kaliya 299,99 euro Amazon!
filter dheeraad ah
xaaqin la dhaqi karo
Qalabka ayaa dhexroorkiisu yahay 32 sentimitir, waxaana arrinta ugu yaabka badan ay tahay in dhumucdiisu ay tahay 7,2 sentimitir oo keliya. waana in Eufy ay mar hore nooga digtay in aan wajaheyno qalab aad u khafiif ah, wax aan xaqiijineyno. Qaybta sare waxa ay ka samaysan tahay dhalo, soo jiidasho leh oo faraha laga qaado, laakiin aad u fudud in la nadiifiyo, wax aan ka door bidayo "jet black" ee noocyada kale ay inta badan xidhaan oo cimrigiisu aanu dhaafin dhawr maalmood. Dhanka miisaanka, ma hayno tirooyin sax ah, iyadoo la tixgelinayo inaanan ku qaadanayn jeebkeena, maan tixgelin in ay muhiim tahay in la saaro miisaanka, inkastoo il baaldi wanaagsan Waxaan kuu sheegi karaa inay aad u fudud tahay.
Qaabka walxaha iyo sifooyinka farsamada
Waxaan haynaa habayn dhaqameed halkii laga eegayo walxaha saldhiga hoose ee Eufy RoboVac G20 Hybrid, oo leh xaaqid dhexe oo isku dhafan, oo leh silikoon iyo naylon bristles, taas oo fikradeyda ah kuwa ugu waxtarka badan dhammaan noocyada dusha sare. Oo ay weheliyaan laba taayir oo barkin ah si ay awood ugu yeeshaan in ay ka gudbaan caqabadaha 3 sentimitir, oo leh taayir aan dhammaad lahayn oo hogaaminaya qalabka iyo hal dhinac oo buraash ah.
Dhanka dambe Taangiga wasakhda ah ayaa hadha, haanta biyaha, taas oo lagu dhejin doono midda aan soo sheegnay, iyo xaaqin ku dheggan Velcro. Waxaan yeelnaa, si kastaba ha ahaatee, waxaan leenahay ON / OFF, wax aan lagu arag badeecadan noocaan ah waayadan oo si daacad ah loo qadariyo, gaar ahaan haddii aan qorsheyneyno inaanan isticmaalin waqti dheer, Eufy ayaa si fiican u tilmaamay.
Ugu dambeyntii qaybta sare, sidaan sheegnay, waxaan leenahay saldhigga dhalada ah, hal badhan oo loogu talagalay qaabeynta iyo maamulka iyo isku xirka WiFi ee tilmaamayaasha LED, ma jiraan wax cajiib ah.
Qaybta farsamada, waxaan leenahay Isku xirnaanta WiFi in la isku waafajiyo RoboVac G20 Hybrid-kayaga Eufy app, ee laga heli karo labadaba macruufka sida Android gabi ahaanba bilaasha. Waxaan sidoo kale haysanaa dareeraha gyro ee socodka, iyo sidoo kale taxane taxane ah oo diirada saaraya robot-ka oo aan ku dhicin dusha sare ee kala duwan. Isla marka la eego awoodda nuugista, taas oo rogrogmi doona inta u dhaxaysa 1.500 iyo 2.500 Pa iyadoo loo eegayo baahidayada, dusha sare ee la ogaaday iyo awoodda aan u xilsaarnay codsiga.
Nadiifinta iyo hawlaha
Marka aan isku xirno robot-ka arjiga Guriga Eufy waxa aanu awood u yeelan doonaa in aanu ku badalno inta u dhaxaysa afar nooc oo nuugid iyo habka "xoqida" Qalabkani inkasta oo aanu lahayn nidaamka navigation-ka laser-ka, waxa uu isticmaalaa nadaam loo yaqaan Smart Dynamic Navigation, taas oo ah in uu isticmaalo xariiqyo barbar socda halkii uu ka isticmaali lahaa nidaam random ah, kaas oo u ogolaanaya in uu si sax ah oo hufan u nadiifiyo.
Waxaan leenahay nidaam ah xoqin iyada oo loo marayo xaaqin qoyan, kaas oo, sida aad si fiican u taqaan, soo jiidashada sagxadaha alwaax iyo sagxadaha, laakiin ka taga "calaamadaha qoyan" ee sagxadaha dhoobada.
Sawaxanka ugu badan ee ay soo saarto waa 55dB wax cajiib ah marka loo eego awoodda nuugista iyo dhumucda qalabka, waana in mid ka mid ah dhismaha Eufy uu si sax ah u sharxayo robot aamusan oo aan la dareemin. Ugu dambayntii, waa in aan maskaxda ku haynaa in aan awood u yeelan doono in aan la jaanqaadno Alexa mar kasta oo aan ku guulaysanay in aan si degdeg ah ula habayn codsiga.
Nadiifinta Goobta (goobooyin)
Sida for ismaamul, Waxaan u socon doonaa inta u dhaxaysa 120 daqiiqo oo ay na siiso habka aamusnaanta ee nuugista ugu yar, raacaya 70 daqiiqo oo nadiifin ah qaabka caadiga ah iyo qiyaastii 35 daqiiqo haddii aan u dhigno habka nuugista ugu badan.
Halkaa marka ay marayso waxa ina soo food saartay Robot si cadaalad ah u wada shaqayn kara, kaas oo inta badan u taagan in uu aamusan yahay oo is haysta, kaas oo ka fog iska yeelyeelka kale ku kooban yahay in uu hawshiisa u guto si aan filayn. Madax-bannaanida ayaa ku filan awoodda nuugista ayaa ah mid cajiib ah, gaar ahaan marka la tixgeliyo cabbirka qalabka.
Codsigu waxa uu leeyahay taxane hawleed xaddidan oo waafaqsan sifooyinka qalabka. Hubaal inaan kulanno ka hor inta aan beddelka ahayn dhexda dhexe ee qiimaha hal mar lagu iibiyo Spain waa 300 euro, inkasta oo aad si toos ah uga heli karto teufy online dukaanka. Mar labaad waa in aan miisaannaa haddii ay mudan tahay in la iibsado qalab isku mid ah oo bixiya sifooyin badan, ama sharadka shirkad la aqoonsan yahay oo shaqeynteeda iyo cimrigeeda si dhab ah loo dammaanad qaaday. Dhanka kale nadiifinta, nuugid, madax-banaanida iyo waayo aragnimadayada buuqa ee Eufy RoboVac Hybrid G20 ayaa ahayd mid wanaagsan.
si fudud u wasakhaysan
Wadada buuxda ee maqaalka: War gadget » General » Eufy RoboVac G20 Hybrid miyir iyo nadiifin wax ku ool ah [Dib u eegis]